ညဘကျအိပျတဲ့အခါ ခေါငျးအုံး မအုံးပဲ အိပျစကျခွငျးကွောငျ့ ရလာနိုငျမယျ့ အကြိုးကြေးဇူးမြား – Nyi Ma Lay
ညဘကျအိပျတဲ့အခါ ခေါငျးအုံး မအုံးပဲ အိပျစကျခွငျးကွောငျ့ ရလာနိုငျမယျ့ အကြိုးကြေးဇူးမြား
ခေါငျး အုံးကလညျး လူတဈေ ယာကျရဲ့ အိပျစကျ မှု မှာ အရေး ပါပါတယျ။ တဈခြို့က ခေါငျးအုံး အပွော ငျးအလဲ လုပျရငျ အိပျ မပြျော တတျတဲ့ လူ တှလေညျး ရှိပါတ ယျ။ ခေါငျးအုံ နိမျ့မှ အုံးတတျတဲ့ သူ၊နိမျ့မှ အုံးတတျတဲ့ သူတှေ လညျး ရှိပါတယျ။
ခေါငျး အုံးမ ပါပဲ အိပျကွညျ့ရငျ ရော..? ကနျြး မာရေးအ တှကျ ဘယျလို ကောငျးကြိုး တှေ ရ နိုငျလဲ ဆိုတာ ကိုတော့ အခုလို ဖျောပွထားပါတယျ။
ခါး ရောဂါ ရှိတဲ့ လူတှနေဲ့ ခါးနာတတျတဲ့ လူမြိုးတှေ က ခေါငျး အုံး မွငျ့မွငျ့ အုံး လုိ့ မရပါဘူး။ခေါငျး အုံးကို နိမျ့ တာ၊သကျ သောငျ့ သကျသာရှိတာ မြိုးတှေ ကို ရှေးခယျြ ပေးရပါတယျ။ ခေါငျးအုံး မပါပဲ အိပျရငျ တော့ ခါးနာ သကျသာ တဲ့ အကြိုး ကြေးဇူး ရပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ခါး နာရောဂါ အရှငျး ပြောကျ သှားတာ မြိုး လုံးဝ မဟုတျပါဘူး။ နာကငျြမှုကို ခဏ လောကျ သကျသာ စတောပါ။ ခါးရောဂါ ရှိတဲ့ သူဆိုရငျ ခန်ဓာကိုယျကို သဘာဝ အနေ အထား(ဘာမှ ခုတာ ခံတာ မရှိပဲ)လဲ လြောငျး ပွီး ကြောရိုးကို အနားေ ပးသငျ့ပါတယျ။
လညျပငျးနာ၊ ဇကျနာ တတျတဲ့ လူမြိုးဆိုရငျလညျး ခေါငျး အုံးမပါပဲ အနားယူ ကွညျ့ပါ။ခေါငျးအုံးကွောငျ့ ဇကျနာ ၊လညျပငျးနာတာ မြိုးတှေ လညျး ရှိတတျ ပါတယျ။
ဒါ ကွောငျ့ လညျပငျးနာ ၊ဇကျနာ သကျသာ ခငျြရငျ ခေါငျး အုံးမပါပဲ အိပျကွညျ့ပါ။ ကိုယျက ခေါငျးအုံး မပါပဲ မအိပျတတျဘူးဆိုရငျ တော့ ခေါငျးအုံး အနိမျ့၊မာ မနပေဲ သကျသောငျ့ သကျသာ ရှိတဲ့ ခေါငျးအုံးနဲ့ အိပျကွညျ့ပါ။
ခေါငျးကိုကျ ဝဒေနာ ခံစားနရေတ ယျဆိုရငျ တော့ ခဏ လောကျပဲ ဖွဈဖွဈ ခေါငျးအုံး မပါပဲ အိပျ ကွညျ့ပါ။ခေါငျးကိုကျတာ၊ခေါငျး ကွော တငျးတာ မြိုးတှေ ဖွဈ နမေယျ ဆိုရငျ ဒါ ဟာ ကိုယျအုံးနတေဲ့ေ ခါငျးအုံး ကွောငျ့လညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ လညျပငျးကွှကျသားတှေ မှာ တငျးမာ မှုတှေ ဖွဈပွီး ခေါငျးကိုသှား ထိ ခိုကျ စတောပါ။
စိတျဖိစီးမှုတှေ ကို သကျသာစေ
ခေါငျးအုံးနဲ့ အိပျစကျ ခွငျးက စိတျဖိစီးမှုတှကေို လညျး သကျသာ စပေါတယျ။ လူက အရမျးစိတျဖိစီးပငျပနျးလာ ရငျခေါငျးအုံး မပါပဲ အိပျ ကွညျ့ပါ။ ဒီလို အိပျတာက အဆငျ ပွေ ရငျတော့ သကျသောငျ့သကျသာ ရှိနရေငျ တော့ အိပျ စကျတဲ့ နရောမှာ ပိုပွီး အကြိုး ထူးစမှောပါ။
ကောငျးကောငျး မအိပျ စကျနိုငျဘူးဆိုရငျ လူတဈယောကျရဲ့ တှေးချေါ မှု စှမျးရညျ၊စိတျဖိစီးမှု ဖွဈစတေဲ့ ဟျောမုနျးတှကေို ပို ထှကျ စပေါတယျ။
ခေါငျးအုံး မသနျ့ တာပဲ ဖွဈဖွဈ၊ခေါငျးအုံး လုပျထားတဲ့ အ သားက ကိုယျနဲ့ မတညျ့ရငျပဲ ဖွဈဖွဈ မကျြနှာ ကို ဝကျခွံ ထှကျ စပေါတယျ။ဒါကွောငျ့ ခေါငျး အုံး မပါပဲ အိပျ စကျ ကွညျ့မယျဆို ရငျတော့ ဒီပွဿနာကို ဖွရှေငျး ပွီးသား ဖွဈ သှားမှာပါ။ခေါငျးအုံးက အဆီနဲ့ အညဈ အွေ ကး တှေ စု နေ တဲ့ နရောပါ။
ဒါကွောငျ့လညျး ခေါငျးအုံးစှ ပျကို အနညျးဆုံး တဈ ပတျ ခါ လြှျောခို ငျးကွတာပါ။ ခေါငျးအုံး မပါပဲ အိပျတာ က ဆံပငျ အတှကျလညျး ကောငျးပါတယျ။ ဆံပငျ နဲ့ ခေါငျး အုံးစှပျ တို့ ပှတျ တိုကျတာ ငွိ တာ မြိုးတှေ လညျး မရှိ စပေါတယျ။ခေါငျး အုံး က ကွာကွာ အုံးရငျ ဆံပငျရဲ့ အဆီ တှကေို စုပျယူ နိုငျပါတယျ။
ခေါင်း အုံးကလည်း လူတစ်ေ ယာက်ရဲ့ အိပ်စက် မှု မှာ အရေး ပါပါတယ်။ တစ်ချို့က ခေါင်းအုံး အပြော င်းအလဲ လုပ်ရင် အိပ် မပျော် တတ်တဲ့ လူ တွေလည်း ရှိပါတ ယ်။ ခေါင်းအုံ နိမ့်မှ အုံးတတ်တဲ့ သူ၊နိမ့်မှ အုံးတတ်တဲ့ သူတွေ လည်း ရှိပါတယ်။
ခေါင်း အုံးမ ပါပဲ အိပ်ကြည့်ရင် ရော..? ကျန်း မာရေးအ တွက် ဘယ်လို ကောင်းကျိုး တွေ ရ နိုင်လဲ ဆိုတာ ကိုတော့ အခုလို ဖော်ပြထားပါတယ်။
ခါး ရောဂါ ရှိတဲ့ လူတွေနဲ့ ခါးနာတတ်တဲ့ လူမျိုးတွေ က ခေါင်း အုံး မြင့်မြင့် အုံး လုိ့ မရပါဘူး။ခေါင်း အုံးကို နိမ့် တာ၊သက် သောင့် သက်သာရှိတာ မျိုးတွေ ကို ရွေးချယ် ပေးရပါတယ်။ ခေါင်းအုံး မပါပဲ အိပ်ရင် တော့ ခါးနာ သက်သာ တဲ့ အကျိုး ကျေးဇူး ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ခါး နာရောဂါ အရှင်း ပျောက် သွားတာ မျိုး လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး။ နာကျင်မှုကို ခဏ လောက် သက်သာ စေတာပါ။ ခါးရောဂါ ရှိတဲ့ သူဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်ကို သဘာဝ အနေ အထား(ဘာမှ ခုတာ ခံတာ မရှိပဲ)လဲ လျောင်း ပြီး ကျောရိုးကို အနားေ ပးသင့်ပါတယ်။
လည်ပင်းနာ၊ ဇက်နာ တတ်တဲ့ လူမျိုးဆိုရင်လည်း ခေါင်း အုံးမပါပဲ အနားယူ ကြည့်ပါ။ခေါင်းအုံးကြောင့် ဇက်နာ ၊လည်ပင်းနာတာ မျိုးတွေ လည်း ရှိတတ် ပါတယ်။
ဒါ ကြောင့် လည်ပင်းနာ ၊ဇက်နာ သက်သာ ချင်ရင် ခေါင်း အုံးမပါပဲ အိပ်ကြည့်ပါ။ ကိုယ်က ခေါင်းအုံး မပါပဲ မအိပ်တတ်ဘူးဆိုရင် တော့ ခေါင်းအုံး အနိမ့်၊မာ မနေပဲ သက်သောင့် သက်သာ ရှိတဲ့ ခေါင်းအုံးနဲ့ အိပ်ကြည့်ပါ။
ခေါင်းကိုက် ဝေဒနာ ခံစားနေရတ ယ်ဆိုရင် တော့ ခဏ လောက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ခေါင်းအုံး မပါပဲ အိပ် ကြည့်ပါ။ခေါင်းကိုက်တာ၊ခေါင်း ကြော တင်းတာ မျိုးတွေ ဖြစ် နေမယ် ဆိုရင် ဒါ ဟာ ကိုယ်အုံးနေတဲ့ေ ခါင်းအုံး ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လည်ပင်းကြွက်သားတွေ မှာ တင်းမာ မှုတွေ ဖြစ်ပြီး ခေါင်းကိုသွား ထိ ခိုက် စေတာပါ။
စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ကို သက်သာစေ
ခေါင်းအုံးနဲ့ အိပ်စက် ခြင်းက စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို လည်း သက်သာ စေပါတယ်။ လူက အရမ်းစိတ်ဖိစီးပင်ပန်းလာ ရင်ခေါင်းအုံး မပါပဲ အိပ် ကြည့်ပါ။ ဒီလို အိပ်တာက အဆင် ပြေ ရင်တော့ သက်သောင့်သက်သာ ရှိနေရင် တော့ အိပ် စက်တဲ့ နေရာမှာ ပိုပြီး အကျိုး ထူးစေမှာပါ။
ကောင်းကောင်း မအိပ် စက်နိုင်ဘူးဆိုရင် လူတစ်ယောက်ရဲ့ တွေးခေါ် မှု စွမ်းရည်၊စိတ်ဖိစီးမှု ဖြစ်စေတဲ့ ဟော်မုန်းတွေကို ပို ထွက် စေပါတယ်။
ခေါင်းအုံး မသန့် တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ခေါင်းအုံး လုပ်ထားတဲ့ အ သားက ကိုယ်နဲ့ မတည့်ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် မျက်နှာ ကို ဝက်ခြံ ထွက် စေပါတယ်။ဒါကြောင့် ခေါင်း အုံး မပါပဲ အိပ် စက် ကြည့်မယ်ဆို ရင်တော့ ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်း ပြီးသား ဖြစ် သွားမှာပါ။ခေါင်းအုံးက အဆီနဲ့ အညစ် အြေ ကး တွေ စု နေ တဲ့ နေရာပါ။
ဒါကြောင့်လည်း ခေါင်းအုံးစွ ပ်ကို အနည်းဆုံး တစ် ပတ် ခါ လျှော်ခို င်းကြတာပါ။ ခေါင်းအုံး မပါပဲ အိပ်တာ က ဆံပင် အတွက်လည်း ကောင်းပါတယ်။ ဆံပင် နဲ့ ခေါင်း အုံးစွပ် တို့ ပွတ် တိုက်တာ ငြိ တာ မျိုးတွေ လည်း မရှိ စေပါတယ်။ခေါင်း အုံး က ကြာကြာ အုံးရင် ဆံပင်ရဲ့ အဆီ တွေကို စုပ်ယူ နိုင်ပါတယ်။
Previous post ခငျြးတှငျးမွဈရေ အတကျအကြ နဲ့ ဆနျ့ကငျြဘကျ‌ ပွောငျးလဲဖွဈေ ပျါနေ‌သော မွနျမာနိုငျငံက သဘာဝ တှငျးကွီး
Next post စမတျဖုနျး အလှနျအကြှံ သုံးခွငျး ကွောငျ့ Focal Seizures ရောဂါဝဒေနာကို ခံစားနရေတဲ့ ကောငျလေး